Zidane Oo Ku Margaday Su’aal Laga Weydiiyey Ronaldo Iyo Messi
HomeSpainZidane Oo Ku Margaday Su’aal Laga Weydiiyey Ronaldo Iyo Messi
Kaaliyaha tababaraha kooxda Real Madrid, Zinedine Zidane ayaa ammaan ballaadhan u soo jeediyey xiddiga kooxdaas ee Cristiano Ronaldo, kaas oo uu ku tilmaamay nin caqligiisu sarreeyo oo koobka adduunka ee xagaaga lagu qabanayo wadanka Brazil isku muujin doona.
Ronaldo ayaa la filayay in uu ciyaaro kulankii Espanyol ee Sabtidii, laakiin waa uu ka baaqday dhaawac haleeley laba toddobaad ka hor, laakiin waxay rajadu tahay inuu caafimaad heli doono ka hor ciyaarta Faynalka Champions League ee toddobaadka dambe ay isku haleeli doonaan Real Madrid iyo Atletico Madrid.
Sidaas oo ay tahay, Zidane ayaa saadaaliyey, isla markaana kalsooni badan ka muujiyey qaab-ciyaareedka ciyaartoygan, waxaanu tibaaxay in uu si heer sare ah uga muuqan doono koobka adduunka, gaar ahaan ciyaarta ugu horreysa oo ay Portugal iyo Germany is haleeli doonaan.
“Ronaldo wuxuu leeyahay awood sarraysa, waxaan maalin walba arkaa marka uu tababarka ku samaynayo Real Madrid, waanan aaminay. Waa nin caqli badan” ayuu yidhi Zidane oo u waramay wargeyska The Times of India.
Zinedine Zidane, waxa uu ka hadlay oohintii Cristiano Ronaldo ee markii uu xulkiisa Portugal u soo saaray koobka adduunka, isagoo 4 gool oo uu ka dhaliyey Sweden ay sabab u noqotay in Portugal ay ka qayb gasho koobka adduunka.
“Aniga ma garanayo sabab uu u ooyi waayo maadaama uu isagu koobka adduunka u soo saaray wadankiisa. Waxyaabaha uu ku sameeyo Real Madrid-na waa mucjiso.
“Waa ciyaartoyga ugu wanaagsan sida aannu annagu u aragno, waxaanan haystaa fursad kasta oo aan ku aamini karo Cristiano in muuqan doono (Koobka Adduunka).
“Dabcan, Portugal waxay ku jirtaa Group adag oo ay ku jiraan Germany, laakiin Cristiano mar hore ayuu muujiyey hibadiisa markii ay wada ciyaareen Germany Euro 2012”.
Zidane ayaa mar la weydiiyey, ka uur doobidayo Cristiano Ronaldo iyo Leo Messi oo labadooduba isku diyaarinaya inay ka qayb galaan koobka adduunka, xafiiltankoodii kooxahoodana u wareejiyaan xulalkooda iyo wadanka Brazil,ayaa waxa uu ku margaday in uu kala saaro Ronaldo iyo Messi, waxaanu ugu jawaabay weriyihii su’aasha weydiiyey: “Jawaabtaasi way naga adag tahay maadaama aanu metelno Real Madrid. Laakiin waa khasab inaan idhaahdo Leo Messi wuxuu leeyahay mowhibo gaar ah oo ay tahay in la daawado. Labadooduba (Ronaldo iyo Messi) waxay ku jiraan qayb gaar ah oo ay guul ku gaadhi karayaan sida ay iyagu doonaan. Marka aynu nahay
Ma Dhabbaa In Kooxaha Ingiriiska Hoos U Dhac Ku Yimi?
16/09/2014 Abdiwahab Ahmed